स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page4of 106 - Koshi Online
केरा मनपर्छ ? यस्तो अवस्थामा झुक्किएर पनि नखानुस् केरा
२३ आश्विन २०७४, सोमबार १३:५७
विराटनगर, असोज २३ केरा एउटा यस्तो फल हो जुन प्राय दैनिकीमा खाइने गरिन्छ । जिम गर्ने मान्छे देखि लिएर अन्य अफिस जाने मान्छेको मनपर्ने फल हो केरा । दैनिक एउटा केरा खानसकेको खण्डमा स्वास्थ्यमा निकै फाइदा हुन्छ । केरामा पोसेसियम, म्याग्नेसियम,…
२२ आश्विन २०७४, आईतवार १५:४६
विराटनगर, असोज २२ निद्रामा बर्बराउने मानिसले निद्रामै अचम्मको व्यवहार देखाउँछ र उसले बर्बराएको प्रस्ट नबुझ्न पनि सकिन्छ । यस्ता मानिसहरू लामो समय चाहिँ बर्बराउँदैनन् । आधी मिनेट जति बर्बराएर उनीहरू चुप लाग्छन् । हामीमध्ये केहीलाई निद्रामा…
गाईको घिउबाट लिन सकिन्छ यस्ता अनेकौ फाईदा : जानिराखौं
२२ आश्विन २०७४, आईतवार १२:५३
विराटनगर, असोज २२ घिउ नेपालीहरूले प्रायः प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसमा अनेक किसिमका एसिड र बीटा क्यारोटीन पाइन्छ । यसले क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगसँग लड्न शरीरलाई मद्दत गर्छ । यसले खानाको स्वाद दुईगुणा बढाउँछ र यो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक…
२२ आश्विन २०७४, आईतवार ११:३१
विराटनगर, असोज २२ तपाईलाई थाहा छ ? हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुन्छ र यसका साथ करीब एक लाख कीटाणु बाहिर आउँछन् । निद्रामा हाच्छ्युँ आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी हाच्छ्युँ गराउने नसाहरू आराम गरिरहेका हुन्छन् । यो एक एक शारीरिक प्रक्रिया…
ग्यास चाडै सकिन्छ : यसरी पनि गर्न सकिन्छ ग्यासको खपत
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:३२
विराटनगर, असोज २० ग्यासको भाउ बढ्दो क्रममा हरेकको लक्ष्य कसरि ग्यासलाई धेरै दिन टिकाउने हुन्छ । ग्यास महँगो छ, यसको बचत गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि कसैले गर्दैैन । त्यसो भए खाना पकाउने ग्यासलाई कसरी धेरै समय टिकाउने त ? जान्नुस्,…
विराटनगर, असोज २० नेपालकी चर्चित अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी, नाइँ नभन्नु ल २, सुब्बा साब, कारखाना, लप्पन छप्पन, पशुपतिप्रसाद चलचित्रसम्म आइपुग्दा उनको क्रेज बढ्दो छ । वर्षा अभिनयमा जति धेरै क्रेजी छिन्, उतिनै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत…
गर्भवती महिलाले काम गर्दा यस्ता कुरालाई सधैं राख्नुपर्छ ख्याल
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १४:५०
विराटनगर, असोज २० ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरू गर्भवतीको सुरुवाती चरणदेखि सुत्केरी हुँदासम्म पनि सजिलो–गाह्रो जस्तोसुकै काममा सक्रिय रहने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाभन्दा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने…
जन्डिस लाग्न नदिन के गर्ने ? यसो भन्छन चिकित्सक
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १३:४२
विराटनगर, असोज २० जन्डिस अर्थात् कमलपित्तका बिरामी वर्षैभरि देखिन्छन् । तर, यो एउटा यस्तो अवस्था हो, जुन बेलामा बिरामी र उसका आफन्तले उपचार गर्ने तरिकाबारे यति सुझाव पाउँछन् कि उनीहरू नै दोधारमा पर्छन् । कहाँ उपचार गर्ने, के खाने, के…
यात्रा गर्दा यस्ता औषधि बोक्न नबिर्सनुहोस्
१९ आश्विन २०७४, बिहीबार ०८:०५
सरिता भुर्तेल, स्टाफ नर्स घरदेखि टाढाको यात्रा गर्नुपर्ने छ । दसैँ सकियो, घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ होला । आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ हिँड्नुपर्ला । तर, यस्तो यात्रामा निस्किनुअघि औषधि बोक्न कहिल्यै बिसर्नु हुँदैन । यात्राका वेलामा जे–जस्तो समस्या…
दसैँको खान्कीले बिरामी बनायो ? यसरी गर्नुस् उपचार
१८ आश्विन २०७४, बुधबार १७:०१
डा. नन्दु पाठक चाडपर्वको वेला अधिकांशले स्वास्थ्यलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । स्वास्थ्य जे–जस्तो होस्, खानपानलाई ध्यान दिन्छन् । तर, यसो गर्नु राम्रो होइन । यस्तो खानपानले समस्या बनाएमा गाउँघरमा भनेको वेलामा स्वास्थ्यकर्मी पाउन पनि…